Lalàna 6 mahatsara ny tongotra mandavan-taona …
Andro mafana, orana sy fotaka, vovoka… mety hanimba ny tongotra avokoa izany. Raha voafehinao tsara anefa ny “lalàna”
mikasika ny fikarakarana tongotra dia ho hitanao fa na any amin’ny vanim-potoan’ny hatsiaka aza dia tsy hihontsona ihany koa ny tongotrao. Ahoana ny atao mba hananana tongotra mahafatifaty mandavan-taona ?
Mahay manety hohon-tongotra
Mahasalama ny hohon-tongotra fohy no sady tsy manimba kiraro. « Coupe-ongles » no tsara ampiasaina ary atao miendrika efa-joro mihorirana tsara mba tsy hitarika an’ireny « ongles incarnés » ireny, izany hoe : misisika maniry any ambany hoditra ilay hoho. Mampiasa “lime” avy eo mba tsy haranitra be ireo hoho ary arahina “polissoir” indray mba hamaranana ny fikoloana azy.
Manokana fotoana hanadiovana
Rehefa atao “gommage” matetika ny tongotra dia malefaka ilay hoditra eo aminy, indrindra fa ny eo amin’ny vodin-tongotra. Aza miandry “gommage” foana anefa vao hikosoka tongotra, fa koseho malefaka izany isan’andro, mba hahatsara azy.
Na hivoaka ny trano na tsia ; na hanao kiraro feno na hampiseho tongotra … amandino foana izy ireo. Raha maina foana mantsy ny tongotra dia mora vakivaky. Raha maina sy makina indray ny hoditra manify kely manodidina ny hoho dia tsara raha mampiasa “gel de soin special cuticule”. Vidiana manokana eny amin’ny mpivarotra kojakoja fikoloana endrika amam-bika izany. Ahosotra amin’ny faritra manodidina ny hoho io akora io mba tsy harary sy hiendakendaka ireo hoditra manify ireo.
Miady amin’ny hatsembohana
Raha tsembo-dava ny tongotrao dia hosory « talc », indrindra fa ny eo amin’ny vodin-tongotra izay foiben’ny taova mpamokatra hatsembohana. Raha tena tafahoatra anefa izay hatsembohana izay dia aleo mividy « crème anti-transpirante » eny amin’ny farmasia.
Miady amin’ny kitro
Raha tsy tiana hisy kitro ny tongotra dia fadiana ny kiraro tery be na mangeja ny lalan-drà. Tsy tokony hikosokosoka na hikiky ny hoditra koa anefa ny kiraro, izay zava-pitranga rehefa somary malalaka izy. Raha mbola azo atao koa dia ajanona ny kiraro manimba hoditra sy ny bà vita amin’ny akora sentetika, izay mampifitsaka ny hadirin’ny hoditra eo amin’ny tongotra.
Aza atao tsirambina mihitsy ny manome fahafinaretana ny tongotra, rehefa vizana. Lomana ao anaty koveta misy rano mafana sy sira izy, akimpy ny maso, mandritra izany ary atao mandritra ny 15 minitra izany. Tondrahana rano mangatsiaka indray avy eo ny ranjo. Rehefa vita izay dia mipetraka eo ambony seza ary manitsaka tavoahangy feno rano. Lalaovina amin’ny tongotra ilay tavoahangy, miala eny amin’ny rantsana dia alefa mankany amin’ny vodin-tongotra. Manitsaka kanety indray avy eo ary tsy ajanona raha tsy efa mahazo aina tsara. Manao kapakapa maivana, aorian’izay, ary tsy terena ny elakela-drantsana. Mialohan’ny hatory dia orina kely ny faladia sy ny ranjo.
Isaorana ny Salon de Beauté Haihaingo Andavamamba, ampitan’ny MadaHotel tamin’ny fiaraha-miasa. Izy ireo, izay manome tolotra sy fihenam-bidy ho an’ireo mitondra gazety Jejoo eny an-toerana. Fifandraisana : 033 82 965 29